China Steam Coupling စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Donghuan
မြေပြင်အဆစ် ပြီးပြည့်စုံသော တံဆိပ်ခတ်ပိုက် တပ်ဆင်မှုကို သံပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ဖိအားမြင့်လေနှင့် ရေနွေးငွေ့ပိုက်ကို အမျိုးသား NPT ချည်ကြိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။အမျိုးသား NPT ကြိုးချည်ချိတ်ဆက်မှုများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် အခြားတစ်ဖက်တွင် ပိုက်ကုပ် သို့မဟုတ် ဖရန့်စွပ် သို့မဟုတ် ferrule (မပါဝင်ပါ) နှင့် အမျိုးသမီးအမျိုးသား NPT ချည်မျှင်ချိတ်ဆက်မှုများနှင့်ချိတ်ဆက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့်အခါ ရေပိုက်ပေါ်တွင်တင်းကျပ်စွာတံဆိပ်တစ်ခုဖန်တီးရန် ဆူးအစွန်းတစ်ခုပါရှိသည်။ဤအံဝင်ခွင်ကျသည် ခိုင်ခံ့မှု၊ ပျော့ပျောင်းမှု၊ ပျော့ပျောင်းမှုနှင့် သံချေးတက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန်အတွက် ချထားသော သံဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ဓာတုဒဏ်ခံနိုင်စေရန် ပိုလီမာထိုင်ခုံတစ်ခုပါရှိသည်။ဤ Boss မြေပြင်အဆစ် ပြီးပြည့်စုံသော အလုံပိတ်ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းကို 450 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိ ရေနွေးငွေ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အကြံပြုထားသည်။
1. မြေပြင်အဆစ်အမျိုးသမီးပိုက်ချိတ်ဆက်မှုအစုံတွင် ရေပိုက်ပင်စည်၊ အမျိုးသမီး NPT သံချေး၊ နှင့် တူဆုံလှည့်တို့ ပါဝင်သည်။နှာတံ၏နှာခေါင်းရှိ တံဆိပ်သည် ပိုက်ပင်စည်ကို သံတူဖြင့်ဆွဲယူသောအခါ တင်းကျပ်သောတံဆိပ်တစ်ခု ဖန်တီးသည်။
2.Material: ကြိတ်၍ရနိုင်သော သံ
3. အများဆုံးအလုပ်လုပ်အပူချိန်: 450 ° F
4. ရနိုင်သောအရွယ်အစား- 1/2''—3''
5.Application- အမျိုးသမီးသုံး spud များသည် ပိုက်အလျား နှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ရန် အဆင်ပြေသော ချည်ကြိုးများသာ ချိတ်ဆက်ရန်၊ သို့မဟုတ် တစ်ခုတည်းသော အရှည်ကို အမျိုးသား သို့မဟုတ် အမျိုးသမီး ချည်မျှင်ထွက်ပေါက်သို့ ချိတ်ဆက်ပေးပါသည်။Ground Joint Fittings တွေနဲ့ အသုံးပြုပါ။၎င်းတို့သည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပိုက်ချိတ်များဖြစ်ပြီး၊ ရေနွေးငွေ့ပိုက်ချိတ်ဆက်မှုများအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ အကြံပြုထားသည်။၎င်းတို့ကို လေ၊ ရေ၊ ရေနံအရည်၊ ဓာတုပစ္စည်းများ စသည်တို့အတွက် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။
6. အစိတ်အပိုင်းများ- ဇင့်ချထားသော သံတောင်ပံခွံ၊ အမျိုးသမီး NPT၊ BSP Spud၊ ရေပိုက်ပင်စည်
7.Style- တောင်ပံခွံနှင့် အမျိုးသမီး Spud Ground Joint ပါသော Hose Stem
8. မျက်နှာပြင် : သွပ်ပြားပြား
9. သတ်မှတ်ချက်များ ငွေပေးချေမှုများ- မထုတ်လုပ်မီ TT 30% ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုများနှင့် B/L မိတ္တူကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် လက်ကျန်ငွေကို USD ဖြင့် ဖော်ပြထားသော ဈေးနှုန်းအားလုံး၊
လျောက်ပတ်တယ်။, ဝက်အူဖြင့်ပိုက်ကလစ်, အလူမီနီယမ်ပိုက် တပ်ဆင်မှုများ, Hose With Coupling, Hinged Pipe Clamp, American Standard Fittings များ,